Fikarohana momba ny firaisana Ny Monastera Bodista iray dia maniry ho lasa fianakaviana katolika Romana: Ny trangan'i Sandika Tharanga - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Mpikaroka: Erlender Haraldsson, PhD
From: Nahita hazavana aho ary tonga eto, nataon'i Erlender Haroldsson, PhD sy James Matlock, PhD
Sandika Tharanga dia teraka tamin'ny Mey 1979 tamin'ny ray aman-dreny katolika romana izay nipetraka teny amin'ny sisin'ny Colombo, Sri Lanka. Tamin'ny faha-telo taonany dia nanomboka niresaka momba ny fiainana taloha ho moanina ao amin'ny monasitera iray izy. Nilaza izy fa misy moanina efatra na dimy mipetraka ao, izay eo ambany fahefan'ny moanina iray. Nangataka ny hoentina miverina any amin'ny monasiterany izy. Toy ny tamin'ny tranga teraka tao amin'ny vatana vaovao indray, nanambara i Sandika fa tsy ny reniny no tena reniny. Nangataka izy mba ho entina any an-tranon'ny reniny teo aloha.
Sandika dia manandrana manova ny ray aman-dreniny amin'ny fiainany taloha Fivavahana: Bodisma
Hatramin'ny fotoana nanombohany niresaka momba ny androm-piainany taloha, dia nampiseho ny fihetsiky ny moanina bodista i Sandika. Nandresy lahatra ny ray aman-dreniny izy mba hahazo ny sarin'i Buddha ary avy eo sarivongana Buddha. Haka voninkazo izy ary hametraka azy ireo ho fanomezana ho an'ny sarivongana Buddha sy sarivongana. Tsy liana tamin'ny fandehanany tany am-piangonana izy fa naleony nankany amin'ny tempoly bodista. Tao anaty fihomehezana mampihomehy dia nanandrana nanova ny ray aman-dreniny katolika ho amin'ny bodista ny zazalahy kely izay notoherin'izy ireo.
Mazava ho azy fa hihira fisaonam-pinoana i Sandika, izay tsy takatry ny ray aman-dreniny, fa nino izy ireo fa nihira tao Pali ny zanany lahy, izay fiteny avy any Inde izay nosoratana ao amin'ny Baibolin'i Theravada ao Sandika. intelo isan'andro. Ankoatra izany, tamin'ny andro feno volana, i Sandika dia nangataka ny rainy hitondra azy any amin'ny tempoly bodista, izay fomban-drazana an'io fivavahana io.
Nandresy lahatra ny ray aman-dreniny Katolika koa izy mba hanome vola ho an'ny moanina boddhista ary namporisika ny ray aman-dreniny hiditra ny moanina boddhista tonga tao an-tranony izy ireo hanao fanasana. Ankoatra izany, dia tsy nety nihinan-kena izy, toy ny zaza kely, izay mifanaraka amin'ny fampianarana bodista koa.
Nangataka ny hoentina any amin'ny tempoliny taloha i Sandika. Niara-niasa i Dada tamin'ny fitondrana an'i Sandika tany amin'ny tempoly Bodista maromaro tao amin'io faritra io, fa i Sandika kosa tsy nanaiky ny iray tamin'izy ireo ho toy ny fiainany taloha. Tao amin'ny tempoly iray, izay niorina roa kilaometatra niala ny fonenany, dia nanamboatra fehezam-boninkazo sandika i Monika ary niandry ny zavatra hataony. Nijanona avy hatrany tany amin'ny efitranon'ny tempoly i Sandika, nanolotra ny voninkazo ho an'ny sarin'i Buddha ary avy eo dia nivavaka tao. Ireo fitondran-tena ireo dia tandindon'ny bouddhist devout.
Sandika dia mpianatra mahay sy tsara toetra, izay ao amin'ny telo amin'ireo kilasiny rehetra. Ny mari-pahaizana tsara indrindra dia tao amin'ny lohahevitra tiany indrindra, ny Bodisma. Nankany amin'ny sekolin'ny Alahady Bodista izy ary dia niaiky tao amin'ny Ananda College, toeram-pampianarana bodista malaza. Nahavita mari-pahaizana momba ny siansa izy tatỳ aoriana.
Ny fiainana an-tany Phobia of Explosions
Raha ny fahafatesany taloha, nilaza i Sandika fa handeha amin'ny hetsika iray izay handehanan'ny mponina ao an-tanàna ny moanina boddhista amin'ny sakafom-borona iray. Henony ny fipoahana, izay no zavatra tsaroany farany momba ny fiainany taloha.
Sandika dia nanana tahotra lehibe tamin'ny fikotrokotroka afo sy feo tampoka. Rehefa nahatsapa ireo karazana feo ireo izy, dia nitetika ny hametraka ny tanany teo amin'ny ilany havia teo amin'ny tratrany i Sandika. Ity fametrahan-tanana ity dia nifanaraka tamin'ny mari-pamantarana maizina iray teo amin'ny ilany havia teo amin'ny tratrany.
Na dia tsy fantatry ny olona aza ny endriky ny fiainan'i Sandika taloha, Sri Lanka dia nandeha namakivaky ady ady an-tsokosoko teo amin'ireo mpomba an'i Hindu sy ny ankamaroan'ny governemanta bodista. Heverina fa nandritra ny androm-piainany teo aloha, Sandika dia maty nandritra ny korontana tamin'ity ady ity. Nandritra ny fitroarana hindoa tao 1971, valo taona talohan'ny nahaterahan'i Sandika, dia nisy moanina Bodista maro novonoina.
Ny fanambadiana vovoka: Ny finoana sy ny fahalalana
Mampihomehy ny fivavahana Hindoa sy Bodista, ary milaza fa mino ny firaisana amin'ny vatana vaovao indray izy ireo. Ny finoana dia tsy mitovy amin'ny fahafantarena ny fahalalana ny fiverenan'ny vovoka amin'ny fanambadiana. Ankoatra izany, ireo izay mampiroborobo ny fiverenan'ny vatana vaovao dia tsy voatery mitory fa ny finoana iray natsangana dia afaka miovaova isaky ny androm-piainany. Raha takatry ny olona fa iray ihany ny Hindu dia afaka teraka, ny Bodista amin'ny iray hafa ary ny fivavahana hafa aorian'izany dia ho lasa adala ny ady toy ireny.
Na dia tsy "voavaha" aza io tranga io tao anatin'io vanim-potoana niainan'i Sandika io, dia tsy fantatra mazava ny toetrany Buddhistes, izay tena mifanohitra amin'ny zavatra inoan'ny Katolika ray aman-dreniny. Izany dia milaza fa misy tranga maro voavaha, izay mampiseho fa ny fanahy, avy amin'ny fiainana iray manontolo, dia afaka:
Manova ny fivavahany, ny maha-firenena ary ny firahalahiana ara-pinoana amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny vatana vaovao
Fiainana taloha Phobia: Sandika dia miteraka lozam-pifamoivoizana i Sandika, izay angamba noho ny namonoana azy tamin'ny daroka baomba na baomba teo amin'ny fiainany teo aloha.
Fiainana ela velona: Rehefa nirotsaka tamin'ny feo mahery i Sandika, dia nametraka ny tanany tamin'ny mari-pamokarana teo amin'ny tratrany izy, izay azo inoana fa nampidirina ratra avy amin'ny bala na fingotra izay nitarika ny fahafatesany taloha.
Xenoglossy: Nandritra ny fanompoam-pivavahana, dia nitanisa andininy tamin'ny fiteny tsy fantatra i Sandika, izay ninoan'ny ray aman-dreniny an'i Pali, ilay fiteny nampiasain'ny moanina bodista tamin'ny vavaka.
Loharano: Haraldsson, Erlendur ary Matlock, James, Nahita hazavana aho ary tonga eto, White Crow Books, 2016, pejy 33-36